स्मरणमा भूपी शेरचन | चितवन पोष्ट दैनिक
स्मरणमा भूपी शेरचन
महान् कवि भूपी शेरचनलाई यतिखेर देशले सम्झिरहेको छ । वि.सं. १९९२ साल पुस १० गते जन्मिएका भूपेन्द्रमान शेरचन पछि नेपाली काव्यमा भूपी शेरचनका नामले प्रख्यात मात्र भएनन्, असाध्यै लोकप्रिय कविका रूपमा समेत उनले आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाए । युवावयमा माक्र्सवादी दर्शनबाट प्रेरित रहेका उनले नेपाली काव्यमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गरेको कुराको इतिहास साक्षी छ । नेपाली काव्यमा उनी आजसम्मका केही उल्लेख्य स्रष्टाहरूभित्र पर्ने कुरा समालोचकहरू नै सगर्व बताउने गर्छन् ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्नशाली घरमा भूपीको जन्म भए पनि उनले नेपाली साहित्यकै लागि आफ्नो जीवनकालभरि नै सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ । पु“जीपति वर्गको युवा अवस्थादेखि नै विरोध गरेका कारण उनमा विद्रोही चेतना पछिसम्म नै रहेको पाइन्छ, जसले उनका रचनाहरूमा प्रमुख भूमिका खेलेको पनि छ । मूलतः विद्रोही चेतना उनका अजम्बरी कविताहरूमा सग्लो रूपमा प्रतिबिम्बित पनि छ । जीवनका अनेकौं उतारचढाव झेल्न पुगेका भूपी शेरचन २०३६ सालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानका सदस्यसमेत बन्न पुगेका थिए ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा भूपीका कृतिहरू त्यति धेरै छैनन्, तर गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने उनका कृति अरू प्रख्यात स्रष्टाहरूका भन्दा कम छैनन् । उनको बहुचर्चित काव्यकृति ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ को प्रभाव जनमानसमा विशिष्ट प्रकारको छ । २०२५ मा प्रकाशित यो कृतिले उनलाई नेपाली स्रष्टाहरूमाझमा अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सफल रह्यो । यसभित्रका कविताहरूले साहित्यमा विद्रोहको नूतन चेतना मात्र उद्घाटित गरेनन्, अझ कलात्मकता र वैचारिकताको उत्कृष्ट उदाहरण बनेरसमेत देखाए । यसभित्रका कविताहरू सरल रहे पनि अनुप्रास र व्यङ्ग्यपूर्ण लयकारिताका कारण अलग धारका छन् । भूपीका अरू कृतिहरूमा परिवर्तन (नाटक, २०१०), नया“ झ्याउरे (कवितासङ्ग्रह, २०११), निर्झर (कवितासङ्ग्रह, २०१५) रहेका छन्
विशेषगरी, नेपाली कविता लेख्ने कविहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भूपीको समकक्षी कवि पाउन ज्यादै दुर्लभ प्रतीत हुन्छ । पछिल्लो पुस्तामा अनुकरणीय प्रभाव छोड्न सक्ने विशिष्ट कविको स्मरण गर्दा उनलाई नै अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी, कवितामा देखिने सुन्दरताको कलात्मक तथा बिम्बात्मक प्रयोगका कारण भूपीलाई अरूभन्दा निकै पृथक् बनाएको कुरामा शङ्का गर्नुपर्दैन । उनका ‘हामी’, ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’, ‘मैनबत्तीको शिखा’ जस्ता असङ्ख्य कविताहरू अजर र अमर छन्, जसलाई किम्बदन्तीका रूपमा बारम्बार उल्लेखसमेत गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपाली साहित्यका यस्ता विशिष्ट साधक भूपी शेरचनको निधन वि.सं. २०४६ साल जेठ १ गते भएको थियो ।